रोचक Archives - राष्ट्रपत्र
अन्तर्राष्ट्रिय, रोचक, समाचार
विवाहको वर्षगाँठमा पत्नीलाई चन्द्रमाको जग्गा उपहार !
भारतको राजस्थान राज्यका एक व्यापारीले आफ्नो विवाहको आठौं वर्षगाँठमा पत्नीलाई चन्द्रमाको जग्गा उपहार दिएका छन्। राजस्थानको अजमेर जिल्लाका व्यापारी धर्मेन्द्र अनिजाले पत्नीलाई चन्द्रमाको जग्गा उपहार दिएका हुन्। उनले आफ्नी पत्नीको चन्द्रमामा जग्गा किन्ने सपनालाई साकार पार्दै डिसेम्बर २४ मा तीन एकड जग्गा उपहार दिएका हुन्। सपनाको नाममा उनका पतिले चन्द्रमाको १४.३ उत्तर अक्षांश, ५.६ पूर्वी देशान्तर, लेक्ट २० पार्सल्स ३७७, ३७८ र ३७९ को तीन एकड जग्गा उपहार दिएका हुन्।सपनासँग प्रेमविवाह गरेका धर्मेन्द्र ब्राजिलमा ट्राभल कम्पनी चलाउँछन्। पृथ्वीमा जस्तै चन्द्रमामा पनि जग्गा किन्ने एउटा लामो प्रक्रिया छ। जग्गा किन्न उनले एक अमेरिकी फर्ममा निवेदन दिएका थिए। जग्गा किन्ने आवेदन स्वीकृत भएपछि सो कम्पनीले कयौंपटक धर्मेन्द्रसँग भिडिओ कन्फ्रेन्समा छलफल गरेको थियो। यसक्रममा धर्मेन्द्रको आर्थिक तथा पा...
गाईलाई खतरनाक जनावर मान्ने गाउँ
हिन्दू धर्ममा गाईलाई लक्ष्मी माता (गौमाता) मान्ने चलन छ । जीव वैज्ञानिकहरूले पनि गाईलाई इमान्दार जनावर रुपमा लिएका छन् । तर, बेलायतको लण्डन यस्तो एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ गाईलाई डरलाग्दो जनावर मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार बेलायतमा एक टनभन्दा बढी वजन भएका जनावरहरूले मानिसहरुलाई कुल्चेर वा ठक्कर दिएर ज्यानै लिने गर्दछन् । पछिल्लो १५ वर्षमा त्यहाँ गाईले ७४ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । त्यति धेरै मानिसको ज्यान लिएकै कारण त्यहाँ गाईलाई खतरनाक जनावरको सूचीमा राखिएको छ । लण्डनस्थित हेल्थ एण्ड सेफ्टी एक्जिक्यूटिभले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार कुकुरभन्दा पनि गाई निकै खतरनाक तथा प्राणघातक देखिएको छ । उक्त निकायले किसानहरुका लागि सुझाव जारी गर्दै आफ्नो घरका गाई तथा पशुहरुलाई सडकमा नछाड्न आग्रह गरेको छ । ...
गुल्मीमा एक वृद्ध दम्पत्तीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । गुल्मी दरकार गाउँपालिका–४ स्थित भट्टेचौरका ७२ वर्षीय तीलबहादुर विश्वकर्मा र ६९ वर्षीया बाटुली विश्वकर्माले जिल्ला अदालत गुल्मीमा आज सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन् । आफ्ना पहिलेका श्रीमान्को मृत्यु भइसकेपछि विसं २०५२ मा बाटुलीको तीलबहादुरसँग दोस्रो बिहे भएको थियो । सामान्य मनमुटावका कारण घरमा सधैँ भरि झगडा गरेर बस्नुभन्दा बाच्दासम्म शान्तिसँग बस्न पाइयोस भनेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सोच बनाएको श्रीमती बाटुली विकले बताइन् । यी वृद्ध दम्पत्तीले जिल्ला अदालत गुल्मीबाट कानूनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग–अलग बस्ने निधो गरेका हुन् । यी दम्पत्ती आफ्ना छोराछोरी र नातीसँगै सम्बन्ध विच्छेदका लागि आज अदालत पुगेका थिए । “बाबा आमा दुवैको सहमतिअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएको हो”, तीलबहादुरका साइलो छोरा देवेन्द्र विश्वकर्माले भने । “दुई/चार वर्ष ...
दक्षिण कोरियाले मानवरहित हवाई ट्याक्सी सेवाको परीक्षण गरेको छ । त्यहाँको भूमि, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार कुल ६५० केजी तौलको उक्त इलेक्ट्रिक हवाई ट्याक्सीमा दुई सिट रहेको छ । ट्याक्सीले १३० किलोमिटरको गतिमा उडान भर्नसक्ने जनाइएको छ । परीक्षणमा प्रयोग भएका मानवरहित हवाई ट्याक्सीको नाम भ्ज्द्दज्ञटक दिइएको छ । उक्त परीक्षणमा छवटा हवाई ट्याक्सी परीक्षण गरिएको थियो । ती हवाई ट्याक्सीलाई चिनियाँ पाइलटलेस एयर ट्याक्सी फर्म इहाङले बनाएको हो । ड्रोन ट्याक्सी कार्यक्रमले शहरी हवाई गतिशीलताको विकास गर्ने, भूमिगत यातायातको भीड कम गर्ने र भविष्यको वृद्धि इञ्जिन सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । यो शहरी भागमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि समेत सहयोगी हुनेछ । गत अप्रिलमा ७० केजी चामलको बोरासहित यी हवाई ट्याक्सीको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको थियो । ...
अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, रोचक, समाचार
ब्ल्याकमेल गर्ने डाक्टरलाई नर्सको कठोर बदला : काटेर पकाइन्, मासु ट्वाइलेटमा हालिदिइन्
आफूलाई यौनका लागि ब्ल्याकमेल गर्ने आफ्ना सिनियर डाक्टरलाई एक नर्सले काटेर पकाइन् । त्यसपछि उनले पाकेको मासुलाई ट्वाइलेटमा हालेर फ्लश गरिदिइन् । घटना चीनको हो । द सनमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार ली फेनपिङ नामकी ती नर्सलाई डाक्टरले लगातार ब्ल्याकमेल गरेपछि रिसमा उनले यस्तो गरेकी थिइन् । ली फेनपिङलाई यो अपराधको लागि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । चीनको स्थानीय मिडियाका अनुसार २५ वर्षकी ली आकस्मिक विभागमा खटिएकी थिइन् । उनको सोही अस्पतालको अर्थोपेडिक्स विभागका उपप्रमुख डा. लू युआनजेनसँग यौन सम्बन्ध थियो । नर्स लीलाई जुवा खेल्ने लत लागेको थियो र उनले जुवामा थुप्रै पैसा हारेकी थिइन् । उनले जुवा खेल्नको लागि आफ्ना सहकर्मी डाक्टर युआनजेनसँग पैसा सापटी लिएकी थिइन् । लीले ती डाक्टरसँग यौन सम्बन्ध राखेर आफूले लिएको पैसा किस्तामा तिरिरहेकी थिइन् । पैसा तिर्नको लागि उनले डाक्टरसँग हप्तामा ...
न प्रचार गरिन् न भोट मागिन् तर अफिस सफा गर्ने महिलाले जिल्ला प्रमुखको चुनाब जितिन्
रुसमा हालै भएको भएको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा जिल्लामा आएको परिणामले पूरै विश्वलाई चकित पारिदिएको छ । यहाँ एक महिला विगत ५ वर्षदेखि एउटा कार्यालयमा सरसफाइको काम गर्थिन् । अहिले चुनाव जितेर उनी त्यही कार्यालयकी प्रमुख भएकी छिन् । रुसको स्थानीय निर्वाचनमा अप्रत्याशित रुपमा नतिजा उल्टिएपछि यस्तो अद्भूत घटना भएको हो । रुसी मिडिया एमकेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेअनुसार यहाँ हुन लागेको निर्वाचनमा पोभालिका जिल्ला प्रमुख पदमा एक जना मात्र उम्मेदवार भए । उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पार्टीका उम्मेदवार थिए । पुटिनको पार्टीका उम्मेदवार निकोलाइविरद्ध चुनाव लड्न कोही पनि तयार भएनन् । अन्ततः उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने स्थिति आयो । निकोलाइ यसअघि पनि सोही जिल्लाको प्रमुख थिए । निकोलाइले चुनावमा पारदर्शिता भएको देखाउन र आफू निर्विरोध निर्वाचित नभइ चुनाव जितेरै आएको देखाउन आफ्नै कार्...
नासाले फेला पार्‍यो सुनको ग्रह
अन्तरिक्षको दुनियाँ रहस्यले भरिएको छ । यसकै रहस्यलाई सुल्झाउनको लागि अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्षको मिशनमा जाने गर्दछन् । अन्तरिक्षका रहस्य यति धेरै छन् कि, हामीले बयान गरेरै सक्दैनौँ ।यसैबीच हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले मंगल र वृहस्पति ग्रहको बीचमा एउटा यस्तो क्षुद्र ग्रह फेला पारेका छन्, जुन ग्रह सुनले भरिएको छ । त्यहाँ सुन यति धेरै छ कि, पृथ्वीमा ल्यायो भने पृथ्वीमा रहेका हरेक मानिस करोडपति बन्छन् ।नासाका अनुसार यो क्षुद्रग्रहको नाम १६ साइकी रहेको छ ।यो क्षुद्र ग्रह आलु जस्तो देखिन्छ । र त्यहाँ पाइएको सुन बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, आयरन र निकलबाट बनेको छ । नासाका अनुसार यस क्षुद्र ग्रहको ब्यास २२६ किलोमिटर छ । त्यहाँ सुन र फलाम अत्याधिक रहेको छ । एजेन्सी ...
आगन्तुकलाई गाली गर्न थालेपछि एउटा चिडियाखानाबाट पाँचवटा सुगालाई त्यहाँबाट हटाइएको छ। गत अगस्टमा फ्रिस्कनीस्थित लिङ्कनशर वाइल्डलाइफ पार्कले ल्याएर ती खैरा अफ्रिकन सुगालाई क्वारन्टीनमा राखिएको थियो। तर पछि मुख्य पक्षीशालामा सारिएपछि ती सुगाहरूले पखेटा फट्कार्दै आफूलाई मन लागेको भाषामा गाली गर्न थालेका थिए। अहिले ती सुगालाई उनीहरूले बोलेको सजिलै सुन्न नसकिने स्थानमा सारिएको छ। जेस न्यूटनले ती चराहरू ल्याइएपछि उनीहरूसँग काम गर्न निकै रोमाञ्चक रहेको बताइन्। यद्यपि उनलाई ती चराले व्यवहार परिवर्तन गर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। उक्त पार्कका प्रमुख कार्यकारी स्टीभ निकोल्स दुःख व्यक्त गर्दै योजनाअनुसार नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ती सुगाहरू प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गाली गर्ने गर्छन् र यदि मानिसहरू तर्सिए वा हाँसे भने अझ त्यस्तै गर्न उनीहरू उत्साहित हुन्छन्। पाँचमध्ये एउटाले ...
१४ वर्षकी बालिकाले नेपालकै अस्पतालमै शिशु जन्माइन्
पेट दुख्यो भनेपछि बाबुआमाले १४ वर्षकी छोरीलाई अस्पताल पुर्‍याए । चिकित्सकले परीक्षण गर्ने क्रममा उनी गर्भवती भएर बच्चा जन्माउने अवस्थामा पुगेको भनेपछि अभिभावक छाँगाबाट खसेजस्तै भए । बालिकाले अस्पतालमै शिशु जन्माइन् ।बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, बालिकालाई गर्भवती बनाउने अरू कोही नभएर आफ्नै काका (२१ वर्ष) रहेछन् । सर्लाहीको उक्त परिवार पोखरामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएको थियो । दाजु–भाउजूकोमा बस्न आएका ती युवाले भतिजीलाई क’र’णी गरेको खुलेको हो । बालिका कहिलेकाहीं विद्यालय जाने गरे पनि प्रायः बाबुआमासँगै मजदुरी गर्थिन् ।प्रहरीका अनुसार गत मंसिरको पहिलो साता ती युवा पोखरा आएका थिए । पुस २ को राति साढे ९ बजेतिर कोठामा कोही नभएको मौका छोपेर काकाले भतिजीलाई करणी गरेको खुलेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुवास हमालले बताए । ‘करिब एक महिना बसेर काका सर्लाही नै फर्किएछन् ।बालिकाले आफूमाथि भएको घट...
विवाह गर्न केटा नपाएपछि ब्राजिलका युवतीहरु सामुहिक रुपमा केटाको खोजीमा
विवाह गर्न केटा नपाएपछि ब्राजिलका युवतीहरु युवतीहरु सामुहिक रुपमा केटाको खोजी गर्न थालेका छन् । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाउँमा ६ सय जना अविवाहित महिलाहरु रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांश ३५ वर्ष मुनिका रहेका छन् । ६ सय जना अविवाहित महिला भएको गाउँमा १ जना पुरुष पनि अविवाहित नरहेको पाइएको छ । तर महिलाले नै भरिएको त्यो शहरमा महिलाकै बोलवाल रहेको छ । उनीहरु विवाहको लागि पुरुष नपाएपछि तनावमा रहेका छन् । रुसका महिलाहरुको पनि हालत उस्तै छ । केटाहरुको सख्यामा अत्याधिक कमी भएको कारण त्यहाँका केटीहरु जो पायो त्यहि केटासँग विवाह गर्न बाध्य भएका हुन् । यस्तै अस्ट्रेलियामा पनि पुरुषहरुको खडेरी नै पर्न थालेको छ । जहाँ १ सय जना महिलामा ९८ जना मात्र पुरुष रहेका छन् ।यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने दशौँ हजार पुरुषको कमी भएको पाइन्छ । तर चीनमा भने महिलाको कमी रहेको छ । चीनमा अबको केही वर्षपछि २५ प्र...